Inona no ataon'i Mark Cavendish? - Mark Cavendish
Tena > Mark Cavendish > Marka vaovao momba ny ratra tany cavendish - vahaolana azo ampiharina
Ny ankamaroan'ny fahatsiarovana mampiavaka ny bisikileta nandritra ny taonjato maro dia avy amin'ireo karazana taona ireo. Ary tantara ireo - mazava ho azy fa any Tuscany isika izao ary ny tantara avy any Coppi sy Bartali, manan-tantara izy ireo, mampiavaka azy ireo. Heveriko fa izany dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fiainana izay misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fanatanjahan-tena.
Fa rehefa mijery ny jery todika ianao, dia henjana be. Ny ankamaroan'ny mpitaingina taona maro dia manana zavatra itoviana ary tiany ny mandeha bisikileta fotsiny. Misy fomba hanosehana ny tenanao amin'ny bisikileta izay tsy tsapako hoe afaka miditra amin'ny karazana fialamboly na fanatanjahan-tena hafa ianao.
Mbola jerena ho toy ny fanatanjahan-tena amin'ny kilasy fiasan'ny olona izany, milaza fa tokony ho nanao izay tokony nataonao izao ianao. Tena mahatsikaiky. Zavatra iray azonao avy amin'ny olona manao izany, azon'izy ireo atao ny manaja izay ataontsika amin'ny maha matihanina antsika.
Vahoaka - misy olona tsy mitaingina bisikileta na mijery azy amin'ny fahitalavitra, tsy fantany ny hamafin'ny bisikiletany. Saingy tsy maninona na dia mandeha miasa aza ianao na miaraka amin'ny fianakavianao, mba hankafizanao ny pedal dia azonao atao an-tsaina hoe manao ahoana ny mandeha 3.500 kilometatra manerana an'i Frantsa. Mahazo olona 200 amin'ny hazakazaka bisikileta ianao fa tsy amin'ny tontolo voafehy.
Ny isan'ny miova dia saika tsy manam-petra. Raha mikarakara ny miovaova ianao na amin'ny fiainana na amin'ny bisikileta, dia mandeha amin'ny alehanao ny zava-drehetra. Raha manao ny tsara rehetra aho hiomanana amin'ny hazakazaka, ny tsara indrindra azontsika atao, dia manana vintana tsara kokoa ianao hahomby.
marikaSimonCavendishMBE dia teraka tamin'ny 21 Mey 1985) dia mpitaingina bisikileta manam-pahaizana momba ny hazakazaka amoron-tsiraka Manx izay mandeha amin'ny UCI WorldTeam DeceuninckQuick-Step ankehitriny. Amin'ny maha-bisikileta an-dalambe azy dia manampahaizana manokana amin'ny taranja madison, isa ary hazakazaka am-pilalaovana; amin'ny maha-racer road azy dia sprinter izy.
Na dia mahomby amin'ny fiakarana aza ny sasany, ny sasany kosa miandry ny fidinana mba hahazoany ny lazany manokana. Fotoana ahafahan'ny vatana salama, saingy fotoana tokony hiasan'ny saina. Hetsika miverina amin'ny risika mitaky famakafakana, fikajiana ary faminavinana.
Ny fanelingelenana segondra dia ampy hanipazana anao hiala ny moron'ny iray amin'ireo làlana alpine ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia mijery ny sasany amin'ireo mpitaingina bisikileta manana traikefa indrindra amin'ny bisikileta matihanina izahay ary mijery ireo teknika ampiasain'izy ireo. Ny hazakazaka dia mety ho azo na ho very amin'ny fidinana an'i Peter Sagan's Super-Tuck tamin'ny Tompondaka Erantany tamin'ny 2015 dia nanolotra azy ny anaram-boninahitra an'izao tontolo izao, jereo fotsiny ny elanelana misy eo aminy sy ireo mpanenjika alohan'ny fidinana ary ampitahao amin'ny rehefa nahatratra ny farany ambany izy rehefa izy ilay tokana tsy nahatratra ny frein teo amorony.
miverina amin'ny fandrakofana amin'ny fahitalavitra 2018
Fihetsika mampidi-doza io, nefa nahomby tamin'ny farany. Nanjary nalaza ny super-tuck tao anatin'izay folo taona lasa izay, saingy nivoatra tamin'ny taranaka maro talohan'io. Fomba maro samihafa no noforonina tamin'ny taona 90, ny sasany namorona tahaka ny fomban'ny endrika Marco Pantani.
Mariho ny fomba ametrahany ny lanjany amin'ny kodiarana aoriana raha mbola mipetraka eo amin'ny lasely ny kibony. Izany dia ahafahana mametraka fitoniana tsara kokoa amin'ny ankapobeny. Ny fiaingana dia natao hanafika ary tsy nisy nanao tsara kokoa noho i Paolo Savoldelli, izay nanome ny anarana hoe Falcon tamin'ny fomba nidinanany.
Nahazo ny Tour of Italia tamin'ny taona 2005 izy noho ny fahaizany midina manaraka. Taorian'ny nandaozan'ireo mpanohitra azy azy teo amin'ny iray amin'ireo fiakarana teo amin'ny sehatra farany ambany ary nanohintohina ny fitarihany tamin'ny ankapobeny, dia gaga izy ireo fa nahatratra azy ireo teny amin'ny fidinana ary notazoniny ny akanjony mavokely mandra-pahatapitry ny fitsangatsanganana lehibe, ankoatry ny fiakarana ary amin'ny fitsapana ara-potoana dia ity angamba no fandresena farany tsy manam-paharoa nataon'i Froome tamin'ny Tour, tamin'ny fomba nanaovany azy. Nahasarika ny sain'ny olona ny fombany tsy mahazatra ary nanjary nalaza tao amin'ny media sosialy, saingy ho gaga ianao raha mahafantatra fa afaka nandeha haingana be izy raha toa ka nampiasa fomba hafa.
Tsy nitondra fahasamihafana firy koa ny fanosihosihany, ankoatry ny fihazonana ny tahan'ny fony ho avo. Ny elanelana 13 segondra nandreseny an-tsehatra dia tokony hitombo iray minitra mahery raha toa ka nampiasa ny fantsom-piaramanidina ambony Peter Sagan. Io no fehin-kevitra navoakan'ny vondrona profesora belza tamin'ny 2017.
fanatanjahan-tena plyometric ab
Nampitahain'izy ireo ny toerana samihafa amin'ny alàlan'ny tionelin'ny rivotra sy ny simika virtoaly. Hitan'izy ireo fa ny toerana misy an'i Chris Froome dia 9% haingana kokoa noho ny toeran'ny mpamily mahazatra, saingy ao ambadiky ny toerana fihemorana be mpampiasa izay 12% haingana kokoa. Pantani nivadika ho haingana kokoa, miaraka amin'ny firaka 14%.
Sagan's Super-Tuck dia tampon'izy rehetra, manome tombony 17% azy amin'ny toerana mahazatra. Na izany aza, ny fidinana dia mihoatra ny hafainganam-pandeha ambony fotsiny. Alao sary an-tsaina ny kamio iray metatra dimy metatra feno entana, mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ary tokony hihodina 90 degre.
Misy vintana tsara mety hofaranany. Raha kamio telo metatra ny haavony dia handeha soa aman-tsara amin'ny famolahana mitovy tanteraka. Toy izany koa amin'ny bisikileta: amin'ny fampihenana ny afovoan'ny hery misintona amin'ny fiolahana dia hahazo fitoniana bebe kokoa ianao ary lasa aerodynamika kokoa.
Noporofoin'i Fabian Cancellara izany taorian'ny fijanonan'ny fiovan'ny kodiarana nandritra ny dingana faha-7 tamin'ny Tour de France 2009. Nanenjika ny vondrona lehibe niverina teny am-pidina i Spartacus tamin'ny akanjo lava mavo. Phil Liggett: ny tsy fisian'ny mpiara-miasa aminy ankehitriny dia midika fiovana mahazatra fa tsy sahirana izy henonao ny fitsofana ny anjomara rehefa mihazakazaka ny maillot jaune de France amin'ny alàlan'ny saha ambadiky ny peloton ary miditra ao amin'ny vondrona.
Aza mikoropaka, tsy misy mpiara-miasa, tsy misy olana. Tsy maintsy nitety fiara sy moto be dia be izy alohan'ny niverenany tao amin'ny peloton. Phil Liggett: talohan'izay dia ny fiaran'ny dokotera, andriamanitro
Paul Sherwen: tsarovy Cancellara dia mpitantana tsara.
Mahavariana ny mijery ny fahaizany mitanjozotra, nampihatra ny sasany ihany koa izy tamin'ny fotoam-pitsarana. Ny antsantsa italiana Nibali dia fantatra amin'ny fitantanany bisikileta. Vantany vao lasa izy dia vitsy no afaka mahatratra azy.
Tao Lombardia 2015, niainga tamin'ny famoahana farany izy ary avy hatrany dia nanokatra banga tamin'ny mpanohitra azy ary tsy nahita azy intsony izy ireo. Rehefa manakaiky ny fihodinan'ny volon-doha izy dia miverina amin'ny toerany nanomboka hifehezana bebe kokoa ny bisikileta. Nahafehy ny teknikan'ny zorony izy mba hahazoany tombony betsaka amin'ity karazana joro ity.
Apetrany ny freins mba hiadana ary hitondra fiara hatrany akaikin'ny fihodinana, tonga any amin'ny tampony izy ary avy eo manomboka mihazakazaka indray, manombatombana ny lalana eo alohany mba handrefesana ny hafainganana vitany amin'ny fihodinana manaraka tokony hifantohany. izay tiany haleha, mifidy ny tsipika faran'izay fohy indrindra eny an-dalana. Tonga amin'ilay ampahany angamba ianao nahatongavanao teto. Ity vondrona mpitaingin-tsoavaly ity dia nitondra hafainganam-pandeha mitovy amin'ity faritra midina ity mandra-pahatongan'ny mpitaingina lalana iray hanova ny toerana 'Superman' ary hahatratra azy ireo.
Mila hery be dia be ny ady amin'ny dragona ateraky ny fikorontanan'ny rivotra. Ity mpitaingin-tsoavaly ity dia nanamafy ny tenany mba hampihenana mafy ny faritra anoloana, noho izany dia nampihena ny fikorontanan'ny rivotra ary namela azy haka haingana avy amin'ny hery misintona amin'ity fiaviana ity. Hafainganam-pandeha izay, amin'ity tranga ity, tsy ho tratra amin'ny alàlan'ny fihazakazahana.
Araka ny fanadihadiana hitantsika teo aloha, ny mpamily dia afaka mampihena ny 24% haingana kokoa amin'ity toerana ity noho ny amin'ny toeran'ny mpamily mahazatra. Ny olona dia manamaivana ny maha-zava-dehibe ny aerodynamika amin'ny bisikileta. Ity clip ity dia mampiseho ny fiovan'ny toerana amin'ny bisikileta.
Tahaka ny itiavan'ny olona ny fahitan'ireto fihetsika ireto dia mihetsika hatrany ny Super Tuck. Misy ny miady hevitra fa rehefa manao ireo haavo ireo ny matihanina dia mety hanome aingam-panahy ireo tanora tsy manana traikefa hanao zavatra mitovy amin'ny làlam-bahoaka, izay mety hiteraka valiny mampivarahontsana. Tamin'ny Febroary 2021, ny federasiona UCI federasiona dia namoaka fandrarana ny super-tuck sy ireo zavatra hafa mitovy aminy izay nanomboka tamin'ny 1 aprily lasa teo.
Misotro ronono ve ny Cavendish?
-Tongasoa eto amin'ny GCN Racing News Show. Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka raha hiala any INEOS i Chris Froome? Manana vaovao mampientam-po ihany koa izahay fa hiverina ny hazakazaka amin'ity herinandro ity, ny sonia maro kokoa avy amin'ny ekipa UAE, Emirates ary ireo vaovao mifandraika amin'ny hazakazaka rehetra. Malahelo ny Giro toa anao koa ve ianao? Tamin'ity herinandro ity tao amin'ny fampiharana GCN dia nitantana ny Giro d'Italia tamin'ny fomba vaovao sy tsy manam-paharoa izahay ary nanolotra anao ny tsara indrindra tao anatin'ny fito taona lasa.
Manana fanehoan-kevitra vaovao, resadresaka manokana, Poll sy quizze izahay, mivantana sy isan'andro amin'ny fandaharana izany. Raha malahelo an'i Dan ianao dia nanolotra izy. Mandehana any amin'ny app GCN ary zahao ity tamin'ity herinandro ity, Anna van der Breggen, tompon-daka amin'ny hazakazaka amoron-dàlana sy ilay tompon-daka eran-tany Chantal van den Broek-Blaakboth, izay tompon-daka amin'ny hazakazaka am-perinasa, dia nanambara fa hiala amin'ny hazakazaka arak'asa izy ireo amin'ny 2021 sy 2022
Ny mpivady holandey dia samy nanao sonia fanitarana fifanarahana tamin'i Boels-Dolmans, izay ho lasa SD Worx amin'ny 2021. Mikasa ny hampitsahatra ny hazakazaka i Van der Breggen aorian'ny Lalao Olaimpika ao Tokyo amin'ny vanim-potoana 2022. Ny roa teo aloha Ilay tompon-daka eran-tany amin'ny hazakazaka amoron-dalana dia ho DS manontolo andro ho an'ny Team Der Sport hatramin'ny 2024 ary hitondra traikefa sy fahalalana lehibe ho an'ny ekipa, saingy amin'ny fomba fijery hafa.
Firenena maro izao no manomboka manala ny lalàna mifehy ny fandrarana, midika izany fa afaka miondrana ivelany ny matihanina, saingy araka ny fantatsika rehetra, firazanana maro no voatery nahemotra na nofoanana. Nisy mpitaingin-tsoavaly iray nanapa-kevitra ny hitondra ny dingana rehetra amin'ny Tour de Yorkshire 2020 irery. Ny mpamily Arkéa Samsic ary tompon-daka nasionaly anglisy teo aloha Connor Swift no nitondra ny dingana efatra tamin'ny hazakazaka irery ary nanoratra izany.
Izy aza dia nanana ekipa mpanaraka, ny sakaizany. Izy dia mekanika Suwanee, DS, mpankafy ary mpaka sary nanjary iray. Nanadio ny zava-drehetra izy ary nandresy ny sprint sy ny QOM tamin'ny filaharana ankapobeny.
Zavatra tsara manaitra. Ny ekipa UAE Emirà dia manohy manao sonia mpamily. Diego Ulissi dia nanao sonia fanavaozana roa taona miaraka amin'ny ekipa ary hitazona azy ireo hatrany amin'ny ekipa hatramin'ny faran'ny 2022 izy ireo.
Ny Italiana dia nandany ny asany matihanina iray manontolo ho ampahany amin'ny fanomanana hatramin'ny nidirany tao amin'ny ekipa tamin'ny 2010 fony izy Lampre Racing niverina. Farany, ny hazakazaka voalohany hatramin'ny coronavirus. Ny fiadiana ny amboara HTV dia iray amin'ireo hazakazaka an-tsehatra lehibe indrindra any Vietnam ary natao nandritra ny dingana 18.
Tokony ho tamin'ny volana aprily izy io, saingy nahemotra hatramin'ny herinandro ity noho ny virus coronavirus. Ekipa 12 misy mpamily fito, izay mahatratra 84 ny totaliny, no hanomboka, ka mpamily vietnamiana ihany no avela, afa-tsy eoropeanina roa, noho ny areti-mandringana. Mampientam-po tokoa ny mahita fa niverina tamin'ny farany ny hazakazaka.
Amin'ity herinandro ity dia manana vaovao ihany koa isika fa i Chris Froome dia mety handao ny antsasaky ny INEOS amin'ny fikatsahana ny tanjony hahazoana ny Tour de France fahadimy. Ny vato misakana lehibe indrindra amin'ity tanjona ity dia toa ny nizara ekipa tamin'ireo roa nandresy tamin'ny hazakazaka teo aloha, Geraint Thomas sy Egan Bernal. Mpandresy Tour telo teo aloha no nitaingina ny Tour de France ho an'ny ekipa iray ihany.
Somary nisy volomaso kely foana rehefa nanao dinidinika ny iray tamin'izy ireo ary nilaza mazava fa te handresy amin'ny Tour de France izy. Ry vahoaka, valo fotsiny ny mpitaingina ekipa mpizahatany amin'izao andro izao. Izany dia mamela trano anatiny dimy, izay zara raha ampy hanohanana mpamily mandritra ny telo herinandro, avelao ihany izy hanohana telo.
Angamba tsy mahagaga raha Froom no mety haongana. Feno 35 taona izy amin'ny herinandro ambony, ary raha nandresy ny Tour izy tamin'io taona io dia izy no mpandresy tranainy indrindra tamin'ny tantaran'ny hazakazaka. Tsy dia fantatra loatra izy izao.
Naharitra dimy andro ny fihazakazahany hatramin'ny nahalavoany tany Dauphiné herintaona lasa izay ary tsy nahazo hazakazaka bisikileta tao anatin'ny roa taona. Na dia takatr'i Brailsford fa efa nandresy in-efatra ho azy ny Froome ho azy, dia mety hieritreritra koa izy hoe: 'Eny, Chris, inona no nataonao tamiko tato ho ato?' mijery tena tsara amin'ny fomba fijerin'i Geraint Thomas. Ny tantara dia milaza amintsika fa isaky ny misy mpiara-miasa amin'ny mpandresy teo aloha dia manomboka mandresy samirery dia tsy tsara ho an'ny mpandresy teo aloha.
Eritrereto ny mpandresy tamin'ny taona 1988 Pedro Delgado. Rehefa nanomboka nandresy izany i Miguel Indurain dia namaky ny Leaving Tea i Delgado tamin'ny fahafantarana fa ho avy izy io ary niverina tamim-pifaliana tamin'ny andraikitra an-trano. Na dia nisy aza ny mpandresy tamin'ny 1996, Bjarne Riis, rehefa nandresy izany ny mpiara-miasa aminy tanora Jan Ullrich.
Riis dia nitaingina ny Tour indray, nahatratra ny faha-11, avy eo nisotro ronono fotoana fohy taorian'izay, nisy zavatra nanjo an'i Lance Armstrong rehefa nandresy izany ny mpiara-miasa aminy Alberto Contador tamin'ny 2009. I Armstrong no nitondra azy io indray ary nahavita ny faha-23, avy eo nisotro ronono. Averina indray, ny Froome an'ny olona rehetra dia tokony hahafantatra ny fomba mety hitrangan'izany.
Taloha, Chris Froome dia be herim-po teo am-piandohana. Raha vao nanomboka nandresy tamin'ny Tour tamin'ny 2013 izy dia tsy nitaingina ny Tour intsony ny mpiara-dia tamin'i Bradley Wiggins teo aloha. Araka ny filazan'i Froome azy: 'Toa an'i Paul Weller i Brad.
Toa an'i Tintin aho. Angamba tsy mamorona isika fa hiseho amin'ilay tantara iray ihany. 'Toa mitady toerana vaovao hanoratana ny toko manaraka amin'ny tantarany i Froome.
Tsy azonay antoka hoe aiza no hisy an'ity toerana ity, fa ny iray amin'izany dia mety ho Bahrain- McLaren, toa ny toerana lojika kokoa no hiafarany satria ny mpiara-miasa aminy taloha Rod Ellingworth no lohan'ny ekipa ankehitriny. Azonao atao ny mieritreritra ny hiara-hiasa indray. Izany indrindra no nahatonga an'i Mark Cavendish hiafara amin'ity ekipa ity.
Midika izany fa mikasa ny hitondra ny Tour de France miaraka amin'i Mikel Landa i Froome, izay hafahafa aminy raha tsy dia mampalahelo tokoa. Nandany ny asany tamin'ny aloky ny mpitarika ekipa toa an'i Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Alejandro Valverde, Nairo Quintana ary Chris Froome ny tenany. Nahatonga ilay tenifototra #freelanda izany, manondro ilay hevitra hoe tamin'ny Grand Tour dia toa nanompo olon-kafa foana izy fa tsy nitondra ho an'ny tenany izao, Froome dia mety hianjera indray eo amin'i Landa.
Ouh ry Landa mahantra. Mety ho lasibatra hafa ho an'ny Froome izay efa voatonona tao amin'ny haino aman-jery bisikileta ny Israel Start-Up Nation, NTT na Movistar, na dia filokana aza i Froome tamin'ity sehatry ny asany ity. Ireo resaka Froome rehetra ireo dia nahatonga anay hanontany tena hoe ahoana ny fandresen'ny Tour fahadimy ho azy amin'ny kalandrie nohavaozina atrehintsika amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
Araka ny efa noresahintsika teto tamin'ny GCN Racing News Show herinandro vitsivitsy lasa izay, rehefa atao ny fitsangatsanganana amin'ny 29 Aogositra, dia hanao izany ny mpamily miaraka amin'ny hazakazaka kely amin'ny tongony. Amin'ny vanim-potoana ara-dalàna, dia ho toy ny hazakazaka Tour de France izany amin'ny volana feb. Ahoana raha, araka ny soso-kevitra tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay, ny fitsidihana dia nahena ho zavatra iray, angamba hazakazaka roa herinandro? Froome dia nahazo ny Tour de France nisy fihenam-bidy, inona ny fandresena fahadimy hataonao hoe mpandresy dimy amin'ny Tour? Mieritreritra ve ianao fa ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpandresy dimy fotoana iarahana amin'i Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ary i Miguel Indurain? Ny lafiny iray amin'ny ady hevitra dia ny Tour de France dia ny Tour de France, ary mazava ho azy fa raha mandresy i Froome dia handresy in-dimy izy.
Tsy izy no diso fa tsy hitovy ny fihodinan'ny hazakazaka, tsy ny Tour foana no Tour. Tena afaka mahafeno fepetra amin'ny Tour de France ve ny hazakazaka tapa-bolana? Toa fitsapan-kevitra izany, sa tsy izany? Dia andao hifidy. Raha ny Tour de France dia 2020 dia hazakazaka tapa-bolana amin'ny volana septambra, ny mpandresy ve dia heverina ho tena mpandresy Tour de France? Mandraisa anjara ary mifidiana amin'ny alàlan'ny fampiharana GCN.
Marina, izany no ho an'ny Racing News Show amin'ity herinandro ity rahampitso miaraka amin'i Si sy Hankand amin'ny seho GCN.
Mbola ao anaty Tour ve i Mark Cavendish?
marikaCavendishtsynisotro rononombola izao. Raha ny marina, raha ny Manxman no resahina, dia hihazakazaka mandritra ny vanim-potoana 2021 izy. 'Tsy maniry ny hijanona aho, tsy te hijanona. Tiako ity fanatanjahantena ity, omeko ny fiainako ity fanatanjahan-tena ity ary tiako ny manohy mitaingina bisikileta, 'hoy i Eurosport mialoha ny alarobia's Scheldeprijs.
Roa taona tsy nahitana azy ioCavendishnoho ny olana ara-pahasalamana, ny tsy fahombiazana ary ny fahasarotana amin'ny fiarovana izao tontolo izaofitetezam-paritrafifanarahana. Nahazo ilay antso tampoka ilay sprinter anglisy taorian'ilay ekipa mpiara-miasa aminy ary ilay sprinter Sam Bennett nesorina tamin'ny lisitra.06.29.2021
Fa maninona no tsy ao amin'ny Tour de France i Cavendish?
Cavendishdia nahazo fifanarahana vaovao niaraka tamin'ny ekipany Deceuninck Quick Step teo aloha tamin'ity taona ity taorian'ny niverenany avy tamin'ny fahaketrahana sy ny ady nandritra ny vanim-potoana maro. Fa izy kosatsyandrasana mitaingina nyfitetezam-paritraary nanaotsymampiofana manokana ho an'ny hazakazaka mandritra ny telo herinandro.1 andro lasa izay
Fa maninona i Mark Cavendish no tsy ao amin'ny Tour de France 2020?
Rehefa avy niady tamin'ny endriny indray,Cavendishdia tsy raharahian'ny olonaTour de Francefifantenana amin'ny taona 2019, tsy hita ny hazakazaka voalohany hatramin'ny 2007, ary rehefa misy ekipa miova2020tsy nahomby tamin'ny vokatra tsara kokoa tamin'ny vanim-potoana voan'ny coronavirus, hita fa saika hanantona ny kodiarany ilay sprinter malaza.06.26.2021
Maninona i Mark Cavendish no tsy ao amin'ny Tour de France amin'ity taona ity?
Efa roa-TAOM-tsy fisian'nyCavendishnoho ny olana ara-pahasalamana, ny tsy fahombiazana ary ny fahasarotana amin'ny fiarovana izao tontolo izaofitetezam-paritrafifanarahana. Nahazo ilay antso tampoka ilay sprinter anglisy taorian'ilay ekipa mpiara-miasa aminy ary ilay sprinter Sam Bennett nesorina tamin'ny lisitra.06.29.2021
Firy ny dingana Tour de France nandresen'i Mark Cavendish?
Cavendishdia mahatratra 32 izaoTour de Franceasanymandresy an-tsehatra, rehefa nandray ny fihetseham-po faha-31 andro roa lasa izay. Ilay fizaranadiatsy hita na tsy misy. Rehefa nanontaniana hoe ahoana izy roaFandresenaampitahaina,Cavendishniaiky izy fa nandranitra azy noho ny fahombiazany teo aloha tamin'ny hazakazaka. Nahazo toky izahay (hatramin'ny voalohanymandresy).roa. 2021.